Ubuhle baseHaiti: UJosephine Baker, izwe lokuqala elimnyama eliyinkanyezi enkulukazi yaseHaiti "Abambalwa bethu bayazi ukuthi uJosephine Baker wayengumHaiti futhi uyaqhosha" ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: December 22, 2018 00: 00 Awekho amazwana
Ngo-1934, wabhala ingoma ethi "Haiti" ukutshela ubuhle besiqhingi sakhe sasekhaya futhi abonise uthando ayenaye. UJosephine wayengumculi wokuqala omnyama owaziwa emhlabeni wonke. Wazibophezele kakhulu futhi wasebenzisa u-notoriety ukuphikisa ukucwaswa kwabamnyama.
Ngokwesibonelo ngesikhathi nokucwaswa e-United States, uJosephine engafuni ukwenza ababukeli ahlukene ngemibala, nge white izihlalo ezingcono kunezinye futhi abamnyama ngemuva igumbi, ngisho ukuyeka Imali eningi.
UJosephine Baker wayeyinhloli ngesikhathi sokumelana eFrance
Leli qembu eliyingqayizivele laseHaiti nalo lihlanganyele empini ye-2e Yurophu engozini yokuphila kwakhe okubambe iqhaza eliyingozi lezinhloli ukuze libhubhise izinhlelo zamaNazi. UJosephine Baker uyisithunywa se-1ère ngobuhle, ithalente, isibindi, ubuqotho nobuhle kubantu baseHaiti!
Wazalwa ngoJuni 3, 1906 kuCarrie McDonald no-Eddie Carson, wakhulela ezindaweni ezihlwempu zaseSaint-Louis (Missouri). Lapho eneminyaka engu-13, washiya ikhaya futhi waba uweta. Uqale njengomdansi emaqenjini amancane, wabe esejoyina iThe Jones Family Bound, eyayicula isuka eWashington iye eSaint Louis. Lapho eneminyaka engu-18, wazinza eNew York, lapho abamba khona iqhaza emikhiqizweni eminingi ehlanganisa iLes Folies Bergères neRevue Nègre.
Ku-1925, inhlanzi yakhe yenza eParis eThââtre des Champs-Elysées. Umculi omncane ngokushesha unqobe umphakathi waseParis lapho i-jazz yemfashini ivutha khona. UCabaret dancer, uhumusha umdwebo othiwa « umdanso wasendle ”. Ngemuva konyaka, wahola izibuyekezo eFolies-Bergère. Uyadansa lapho, egqoke ibhande lakhe lobhanana elidumile, bese eqala ukucula. Kwakungo-1930, eCasino de Paris, lapho ukubuyekezwa kwakhe kwaphumelela khona kukaMistinguett, lapho enza khona « Nginezothando ezimbili ". EYurophu uqoqa impumelelo: wabizwa njengendlovukazi yombukiso wamakholoni ngo-1931, wadlala ku « UZouzou ”noJean Gabin naku-“ Princesse Tamtam ”, udlala eCasino de Paris e « Ukube ngangimhlophe ”futhi ngakhuphuka ngo-1934, « La Créole ”, i-operetta ka-Offenbach.
Isithombe sikaJoseph Baker. Umthombo: www.cmgworldwide.com
Ngonyaka olandelayo, uJoséphine Baker, obuyele e-United States, wethula uhlelo lwakhe ezilalelini ezixubile. Ubuyela eFrance lapho, e-1937, eshada nomFulentshi futhi eba yisakhamuzi saseFrance.
Ekumemezelweni kwempi, kusengenzeka Folies-Bergere naseCasino de Paris eduze noMaurice Chevalier. Uthembekile ezweni lakhe lokutholwa, uJoséphine Baker wajoyina ukuphikiswa, esebenzela izinsizakalo zezobunhloli eFree France enesikhundla sokuba ngummeli wesibili e-Air Force, amabutho asizayo abesifazane. NguDaniel marouani ngubani ophakamisela uJacques Abtey, oyinhloko yamasosha aphikisana nobunhloli eParis, ukuze amqashe. Ngakho, phakathi nempi ehlekisayo (September 1939 no-May 1940) UJoséphine Baker uqoqa imininingwane yendawo lapho amasosha aseJalimane etholakala ezikhulwini ahlangana nazo emicimbini.
Ngasikhathi sinye, wenza ku-Maginot Line ukukhulisa isimilo samasosha. Kepha, kusuka ehlobo lika-1940, iMaginot Line yeqa futhi yalandela imithetho yobandlululo kahulumeni waseVichy, yavalwa kusuka esiteji. Kucatshangwa ukuthi uzovakasha ePortugal naseNingizimu Melika, enkampanini yeAbtey, uletha ePortugal imininingwane ebhalwe ngoyinki ozwelayo ezikolweni zakhe. Ubuyela emuva "La Créole" ukuze ukwazi ukuxhuma kabusha noPaillole eMarseille ngaphambi kokujoyina Abtey ePortugal izwe elingathathi hlangothi, bese usuka uye eNyakatho Afrika. Ukushiya eMorocco, uyasiza Solmsen, umkhiqizi wamafilimu odabuka eJalimane, nomngane wakhe uFritz bashiya iFrance.
Ezinze eMarrakech, uhlakulela ubudlelwano bezepolitiki: UMoulay Larbi el-Alaoui, umzala kaSultan, noSi Mohammed Menebhi, umlamu wakhe, indodana ka-grand-vizier, noSi Thami el-Glaoui, i-pasha kusuka eMarrakech. Kusukela ngo-1943, uJoséphine Baker waba yinxusa langempela leFree France. Entwasahlobo, wenza uhambo olukhulu lweMaghreb, iGibhithe neMashrek. Kulesi senzakalo, ngokusemthethweni uba uLieutenant wesibili wamabutho abesifazane asizayo eFrance Air Force. Lo msebenzi wokumelana noJosephine wenziwa obala ngo-1949 ngumsebenzi kaJacques Abtey, owaseLa Guerre owabhalwa nguJosephine Baker, ehambisana nencwadi evela kuGeneral de Gaulle.
Ukuqashelwa okusemthethweni kwatholakala ngo-Agasti 18, 1961: UGeneral Valin wamnika uphawu lweLegion of Honor, kanye neCroix de Guerre ngentende.
Ephinde washada noJo Bouillon, ubambe iqhaza ekuvikeleni amalungelo abantu futhi usiza izisulu zempi, ebopha ama-charas galas. Umsebenzi wakhe wokupha wasiza kuqala kunomsebenzi wakhe, lapho athatha khona umhlalaphansi ngo-1949. Wathenga isigodlo eMilandes, ePérigord futhi waqala ukwamukela izingane eziyizintandane.
Tribute to Mau Mau e Kenya: Mau Mau kuyinto ubuzwe futhi separatist ukunyakaza zeminyaka Kenyan 1950 kuhlanganise nokulwa nokucindezelwa usengakwazi ugqozi izizukulwane lanamuhla abasha Afrika
I-Oct30 03: 23
HI / LO: 6/4 p
UNkulunkulu: indalo yabo bonke abantu, zonke izinkolo nawo wonke umuntu; akekho uNkulunkulu ngaphandle kwemicabango yabantu, izinkolo kanye nabantu
Ngo-Okthoba 30, 2020 09: 09
I-Funny Tarzan Epic: Njengezindaba zeSpiderman, indaba kaTarzan iyi-epic evezwe ngokungajwayelekile; UTarzan, umlungu, waba kanjani yiNkosi yehlathi phakathi kwabansundu / ama-Afrika?
Ngo-Okthoba 30, 2020 05: 45
Abantu abamnyama / base-Afrika, ngabe babhekene negebe elingenakunqotshwa ukuze bakhuphukele ezingeni labanye abantu? Ngenkathi abanye abantu bethatha abamnyama / ama-Afrika njengezinsalela zesintu, bayasijabulela lesi simo esilulazayo nesilulazayo.
Ngo-Okthoba 30, 2020 02: 33
Ukunganaki okuhlekisayo kobuKristu nentando yeningi eMnyama e-Afrika: e-Afrika emnyama, ubuKrestu kanye nentando yeningi yaseMelika noma yaseNtshonalanga kuhola konke okuchezukile; egameni lobuKristu nentando yeningi, abantu abanamkhawulo; badida inkululeko nokuziphatha okuxekethile
Ngo-Okthoba 30, 2020 00: 00